ပျက်စီးကျဆုံးခြင်းမှ အသစ်ပြုပြင်ခြင်းသို့ | On the Ruin and Regeneration of Fallen Men | Real Conversion
ဒေါက်တာ - ယိုင်မာဂျေအာရ်
လောအင်ဂျလိတ်မြို့ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်း၌ ဟောကြားသောဒေသနာ
မတ်လ ၆ ရက်၊ ၂၀၁၁ သခင်ဘုရားနေ့
“ဇာတိပကတိမွေးသောအရာသည်ဇာတိပကတိဖြစ်၏။ဝိညာဉ်တော်မွေးသောအရာသည် ဝိညာဉ်ဖြစ်၏။ ဒုတိယမွေးခြင်းကို ခံရမည်ဟု ငါဟောပြောသည်ကို အံ့ဩခြင်းမရှိနှင့် (ယောဟန် ၃း၆-၇)
ဇာတိအသွေးအသားသည် အာဒံထံမှ အမွေဆက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ အသစ်တဖန် မွေးဖွား ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဖြစ်ပွားစေတာဖြစ်သည်။ ဘာအတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အသစ်တဖန်မွေးဖွားဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ၊ လုံး၀ဥဿုံပျက်စီးကျဆုံးနေသော လက်ရှိအခြေ အနေကို နားမလည်ပဲ ထိုမေးနည်းကို နှိပ်နှိပ်ချွတ်ချွတ်နားလည် ဖြေဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤဒေသနာ တော်သည် ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ နွေးထွေးတင်ပြလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့၏ လက်ရှိ လုံး၀ဥဿုံပျက်စီးနေတဲ့ အခြေအနေအတွက် ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်အသိမရှိပဲ။ အသစ်တဖန် ပြုပြင်မွေးဖွားဖို့လိုကြောင်း ထည့်ဝင်စဉ်းစားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာက “ကျဆုံးလူသားနှင့် ထိုလူသား၏ အခြေအနေကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြနေသည်။
I. ပထမ လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးတို့၏ မူလအခြေအနေ။
အပြစ်ကင်းစင်လျက် ထာ၀ရဘုရားအား ကိုးကွယ်ခြင်းငှါ၊ သန့်ရှင်းစွာဖြင့် ပထမ လူသား အာဒံနှင့်ဧ၀ကို ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
ထိုသို့ ဘုရားသခင်သည်လည်း မိမိပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အညီ လူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီ ယောက်ျm;၊ လူမိန်းမကို ဖန်ဆင်းပြီးလျှင် (ကမ္ဘာဦး ၁း၂၇)
လူသားသည် ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းသောသတ္တဝါ ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်နှင့်တူအောင် ဖန်ဆင်းခြင်းခံသောသူဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် နာမ်ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်။ လူသားဝိညာဉ်သည်လည်း ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်။ နာမ်ဝိညာဉ်၏ ရုပ်ရည်ဂုဏ်ပုဒ် များသည် ညာဏ်ပညာအမျော်အမြင်၊ ဝမ်းနည်းခံစားလွယ်ခြင်းနှင့် အလိုဆန္ဒများဖြစ်ကြသည်။ ဒေါက်တာချားစ်ဟုတ်စ် ပြောကြားသည်မှာ ဘုရားသခင်သည် နာမ်ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်တော်၏ ဂုဏ်ရည်ဂုဏ်ပုဒ်များဖြစ်သောအကြောင်းအရာ ရှင်းလင်းချက်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း၊ အဆိုးအကောင်း ပိုင်းခြားနိုင်သော အသိစိတ်နှင့် အလိုဆန္ဒစသော ထူးခြားသောဂုဏ်ပုဒ်တို့ဖြင့် လူကို ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းမတည်ရင်းနှီးပေးခဲ့သည်။ အကယ်၍ ဘုရားသခင် သူ၏ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်း ခြင်းမဟုတ်ခဲ့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကို သိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သားရိုင်း တိရစ္ဆာန်များနှင့်အလားတူပြီး ပျက်စီးခြင်းခံရကြပါလိမ့်မည်။(၁၉၄၆ç အတွဲ ၂စာ ၉၇ç ချားစ်ဟုတ်- ပီအိပ်စ်ဒီ၊ အေဲလ်မန်၏ စနစ်တကျ ဘုရားသခင်အကြောင်း လေ့လာခြင်းစာအုပ်)
ငါတွေ့သောအရာတစ်ခုတည်းဟူမူကား ဘုရားသခင်သည် လူကိုဖြောင့်မတ်အောင် ဖန်ဆင်း တော်မူသော်လည်း လူတို့သည် များပြားသောအကြံအစည်တို့ကို ရှာဖွေကြံစည်ကြပြီး (ဒေသနာ ၇း၂၉၊ ထိုအကြောင်းအရာ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁း၃၁ ၌လည်း ဖော်ပြသည်။
ဘုရားသခင်သည်ဖန်ဆင်းသမျှသောအရာတို့ကိုကြည့်ရှုလျှင် အလွန်ကောင်းသည်ကို မြင်တော်မူ၏။
အကယ်၍လူသားတို့ အားနည်းချက်၊ မပြည့်စုံသောအသက်တာမျိုးဖြင့် ဖန်ဆင်းခဲ့မယ်ဆိုလျှင် ထိုအလွန်ကောင်းသည်ဟူသော အရာမှန်မည်မဟုတ်ပါ။ (ဟန်နရီ စီ၊ဘီဆန်၊ပီအိပ်လ်ဒီ၏ နည်းစနစ်တကျ ဘုရားသခင်ကို လေ့လာခြင်းစာအုပ်နိဒါန်းပျိုးမှအဲယလဲမန် ၁၉၄၉ စာ ၂၂ç ထုတ်ဝေ) ဒဗဗျူ၊ဂျီ၊တီရှတ် ပြောခဲ့သည်မှာ လူကိုသန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သောသူအဖြစ် ဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အပြစ်ကင်းစင်ခြင်းထက်သာလွန်၍ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ လူကို ဆန့်ကျင်ဘက် အဆိုးမြင်ဘက်မှ အပြစ်ကင်းစင်သောသူဆိုခြင်းထက် အကောင်းမြင်အားဖြင့် သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သူအဖြစ် ဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူသားတို့၏ အသစ်ပြုပြင်ခြင်း အခြေအနေ သည် လူသားအပြစ်ထဲသို့ မကျဆုံးမှီ မူလသန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော အခြေအနေ၌ ပြည်လည်ဖော်ထုတ် ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ “သန့်ရှင်းခြင်းပါရမီနှင့် မှန်သောဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ဘုရားသခင်နှင့်တူအောင် ဖန်ဆင်းသောလူသစ်ကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်မည်အကြောင်းတည်း။ (ဧဖက် ၄း၂၄) (သဗဗျူ ဂျီ၊တီရှပ်တ်ဖီအိပ်ခ်ျဒီ အမှားမရှိဟု တထစ်ချယုံကြည်လက်ခံသောအယူဖြင့်ဘုရားသခင်ကို လေ့လာ ခြင်းဒေသနာ) ၁၈၈၉ အတွဲ ၂ စာ ၉၆) ဒေါက်တာဂျွန်အယ်လ်ဒစ်တ်ပြောရသည်မှာ “လူသားအစ အာဒံနှင့်ဧ၀တို့သည် အပြစ်ကင်းစင်၊ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သောအသက်တာ မည်မျှကြာကြာ နေထိုင်ခဲ့ သလဲဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့မသိနိုင်ကြပါသော်လည်း အမှန်တကယ် အပြစ်ကင်းစင်သော ကာလ တစ်ခု အထိဖြတ်သန်းအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာဦးကျမ်းက ထောက်ပြနေပါတယ်။ ဖန်ဆင်း ရှင်အရှင်ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးမှ ကမ္ဘဦးမိဘနှစ်ပါးတို့သည် သန့်ရှင်းခြင်း၊ ပျော်ရွှင် ဝမ်းမြောက် ခြင်းနှင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာယပြု နေထိုင်ခဲ့သည်ကို ပြန်တွေးကြည့်မည် ဆိုပါက ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဘယ်ကဆင်းသက်လာကြသည်ကို ထောက်ရှုသော် ကောင်းကျိုးချမ်း သာ၏အကျိုးရလဒ်ကောင်း ရရှိကောင်းရရှိနိုင်ကြသည်။ ဒီအကြောင်းအရာကို တွေးတောစဉ်းစား ကြည့်ပါက နောက်ဆုံးအာဒံဖြစ်သော ခရစ်တော်ဘုရား၏ အံဩဖွယ်ကြီးမားသော ပြန်လည်ပြုပြင် ခြင်း အစီအစဉ်နားလည်ဖို့ရန် ကူညီပါလိမ့်မည်။ (ဂျွန်အယ်လ်-အယ်လ်ဂ်ျဒီဒီ၊ ဘုရားသခင်လေ့လာခြင်း လက်စွဲစာအုပ်တောင်ဘက်ခြမ်း နှစ်ခြင်း စာပေပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း အသင်းk ၁၈၅၈ စာ ၁၄၁ç ၁၄၃ç ၁၄၄)
“ကျမ်းစာလာသည်ကား ရှေ့ဦးစွာသောအာဒံသည် လူသားတစ်ခုလုံးကို အပြစ်ထဲသို့ ကျဆင်းစေသည်”( ၁ကော ၁၅း၂၅ )
နောက်ဆုံးဖြစ်သော အာဒံသည် အပြစ်မှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ရန် ကြွလာသည်။
II. ဒုတိယ၊ ကျဆုံးလူသားများ
“ထာ၀ရဘုရားသခင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်မှတစ်ပါး ထိုဥယျာဉ်၌ ရှိသမျှသောအသီးကို သခင်သည် စားရသောအခွင့်ရှိ၏။ ထိုအပင်၏အသီးကိုကား မစားရ၊ စားသောနေ့တွင် ဧကန်အမှန်သေရမည်ဟု လူကိုပညတ်ထားတော်မူ၏။ (ကမ္ဘာ ၂း၁၆-၁၇)
ဒေါက်တာဒေ့ဂ်ျပြောသည်မှာ လိမ်လည်ဖျားယောင်းခြင်းကို မခံကြပါနဲ့၊ ဘြုရားသခင်သည် နောင်ပြောင်လှောင်သောဘုရားမဟုတ်ဟု ဆို၏။ အာဒံ၏နာမခံခြင်းကြောင့် သူ၏အုပ်စိုးခြင်း အခွင့် အာဏာကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏နည်းလမ်းပင် ဖြစ်သည်။ နာခံခြင်းဖို့ စမ်းသပ်စစ် ဆေးခြင်းသည် အာဒံ၏နာမခံခြင်းကြောင့် ခွင့်မလွှတ်နိုင်သောပြစ်မှု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် တစ်ဦးတည်းသောသား ဣဇက်အား ယဇ်ပူဇော်ရန်ခက်ခဲပြင်းထန်သော စုံစမ်းမှုတစ်ခုအတွက် ကြီးမားသောအာဗြဟံ၏ ယုံကြည်ခြင်းကို ပြသလိုက်တာဖြစ်ပြီး အာဒံခုခံမတွန်းလှန်နိုင်သော ကျူးလွန်ခြင်းကို အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်ကိုနာခံခြင်းဖြင့် ထိုအရာကို ရှောင်သွားလိုက်ခြင်းကို သက်သေထူလိုက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒေ့ဂ်ျအိုင်ဘီဒိုင်ဒီစာ ၁၄၆ နာမခံခြင်းကြောင့် အာဒံသည် ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်မှ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်စွာ ကျဆုံးခဲ့ရသည်။ ဒေါက်ဒေ့ဂ်ျ ပြောသည်မှာ တားမြစ်ထားသောအသီးကိုစားမိခြင်းထက် ကြီးမားသောအပြစ် မရှိတော့ပါ။ ဒေ့ဂ်ျအိုင်ဘီအိုင်ဒီ အာဒံသည် ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်မှ လှည့်ထွက်ခဲ့ပြီ။ မာန်နတ်မြွေဆိုးအမိန့်အာဏာကို နာခံခဲ့ပြီး ဘုရားအမိန့်ကို ငြင်းဆန်ခဲ့သည့်အတွက် သူ့နှင့်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးတို့၏ အသက်ခန္တာဝိညာဉ် လုံး၀ ပျက်စီးခဲ့ရသည်။
“ဤအကြောင်းအရာဟူမူကား အပြစ်တရားသည် တယောက်သောသူအားဖြင့် ဤ လောကသို့ဝင်၍ အပြစ်တရားအားဖြင့် သေခြင်းတရားဝင်သည်နှင့်အညီ လူအပေါင်းတို့သည် အပြစ်ရှိသောကြောင့် သေခြင်းသို့ရောက်ရကြ၏။ (ရောမ ၅း၂၁)
“အပြစ်၏အခကား သေခြင်းပေတည်း” (ရောမ ၆း၂၃)”
“အကြောင်းမူကား တယောက်သောသူသည် နားမထောင်သောအားဖြင့် လူများ တို့ သည်အပြစ်ရောက်သည်နည်းတူ တစ်ယောက်သောသူသည် နားထောင်သောသူအားဖြင့် လူများတို့သည် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ရကြ၏” (ရောမ ၅း၁၉)
၁၅၉၉ ဂျင်နီဗာ၌ ကျမ်းစာ၏အောက်ခြေမှတ်စုကို (ရော မ ၅း၁၉) ပေးထားသည်။ ဤလူသားနှစ်ဦး (အာဒံနှင့်ခရစ်တော်သည် အခြေခံအကြောင်း (၂)ရပ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ တယောက်သောသူက ဇာတိပကတိအားဖြင့် အပြစ်ပွားများစေပြီး၊ တယောက်သောသူက ကျေးဇူးတော် အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သောသူများဖြစ်စေကာ မူလပကတိအခြေအနေမှန်သို့ ပို့ဆောင်ပေးနေသည်။ အပြစ်သည် ဘိုးဘေးအာဒံ၏ခြေလှမ်းများအတိုင်း လိုက်လျှောက်ခြင်း အားဖြင့်ဝင်လာပြီး အကျင့် သီလပျက်ပြားခြင်းအမွေကို ခံရကြသည်။
III. တတိယ၊ လက်ရှိလူသားများ၏အခြေအနေ
ဒေါက်တာဒေ့ဂ်ျပြောသည်မှာ ရှေ့ဦးစွာသော လူသားမိဘတို့နာမခံခြင်း အကျိုးရလဒ် ဒုစရိုက်အပြစ်ကို လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ ဟန့်တားမတားဆီးနိုင်သောကြောင့် လူ သားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံး အမွေဆက်ခံရကြခြင်းဖြစ်သည်။ အာဒံသည် ဘုရားသခင်၏သဏ္ဍာန် တော်နှင့် အညီ ဖန်ဆင်းခံရသော်လည်း အပြစ်ဝင်လာသောအခါ ပျက်စီးခဲ့ရပြီး မိမိပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီ တစ်သဏ္ဍာန်တည်း သားကိုရ၏ဟုဆို၏။ (ကမ္ဘာ ၅း၃)။ ထို့ကြောင့် အာဒံမှ ဆင်းသက်သူ မှန်သမျှတို့သည် မွေးဖွားကတည်းက ကျဆုံးလူသားကဲ့သို့ အခြေအနေနှင့် အကျင့်စာရိတပျက်ပြားပြီး မွေးဖွားဆက်ခံလာကြရသည်။ (ဒေ့ဂ်ျအိုင်ဘီအိုင်ဒီ စာ ၁၅၀)
“ထိုငြင်းဆန်သောသူတို့နှင့်တကွ ငါတို့ရှိသည် အထက်က ကိုယ်ကာယ၏အလိုသို့ ၎င်း၊ စိတ်၏အလိုသို့၎င်းလိုက်သဖြင့် ကာမဂုဏ်တို့နှင့်ကျင်လည်သည်ဖြစ်၍ ကြွင်းသော သူတို့ကဲ့သို့ပင် ပကတိအတိုင်းအမျက်တော်ကို ခံရသောသူဖြစ်ကြ၏။” (ဧဖက် ၂း၃)
“ထိုသူတို့သည် ဥာဏ်အလင်းကွယ်သည်ဖြစ်၍ စိတ်နှလုံးမိုက်မဲသောအားဖြင့် အလင်း မသိသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏အသက်နှင့် ကွာရှင်းလျက်ရှိကြ၏။ (ဧဖက် ၄း၁၈)
“မပြစ်မှားသောသူတစ်ယောက်မျှမရှိ” (၂ရာ ၆း၃၆)။
“ထိုသို့ဖြစ်လျှင် အဘယ်သို့နည်း၊ ငါတို့သည် မြတ်သလောဟု မေးသော်၊ အလျင်း မမြတ်၊ အကြောင်းမူကား ယုဒလူ၊ ဟေလသလူအပေါင်းတို့သည် အပြစ်ရှိကြောင်းကို အထက် ကပြခဲ့ပြီ။ ကျမ်းစာလာသည်ကား ဖြောင့်မတ်သောသူမရှိ တစ်ယောက်မမှမရှိ၊ နားလည်းသော သူမရှိ၊ ဘုရား သခင်ကိုရှာသောသူမရှိ၊ လူအပေါင်းတို့သည် လမ်းလွှဲကြပြီ၊ တညီတညွတ် တည်း အသုံးမရသော သူဖြစ်ကြပြီ။ ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်သောသူမရှိ၊ တစ်ယောက်မျှမရှိ။ သူတို့၏ လည်ချောင်း သည် ဖွင့်ထားသောသချုØင်းတွင်းဖြစ်၏။ သူတို့သည် လျှာနှင့် လှည့်စားတတ်ကြ၏။ သူတို့နှုတ်ခမ်း အထဲမှာ မြွေဆိုးအဆိပ်အတောက်ရှိ။ သူတို့ နှုတ်သည် ကျိန်ဆဲသောစကား၊ ကြမ်းတမ်းသောစကားနှင့် ပြည့်၀၏။ သူတို့ခြေသည် လူ့အသက်ကို သတ်ခြင်းငှါ လျှင်မြန်၏။ သူတို့သွားရာလမ်း၌ပျက်စီးခြင်း၊ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း ရှိ၏။ ချမ်းသာလမ်းကို သူတို့မသိကြ၊ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ရသော အကြောင်းသည် သူတို့မျက်စိ၌မထင်ဟု ကျမ်းစာလာသတည်း။ ပညတ်တရား ပြောသမျှသောစကား တို့သည် ပညတ်တရားကိုခံသောသူတို့နှင့် စပ်ဆိုင်သည်ကို ငါတို့သိကြ၏။ ထိုသို့ဖြစ်၍ လောကီသား အပေါင်းတို့သည် စကားတခွန်းကိုမျှ မပြောနိုင်ပဲ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ အပြစ်သင့်သောသူများ ဖြစ်ကြ၏ (ရောမ ၃း ၉-၁၉)
“ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့် သေလျှက်ရှိသောငါတို့ကို ခရစ်တော်နှင့်အတူ အသက်ရှင်စေ တော်မူပြီ။ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။” (ဧဖက် ၂း၅)
ကျဆုံးသွားသောအာဒံ၏မျိုးဆက်သစ်များ အကျင့်ပျက်ပြားခြင်းနှင့် အပြစ်ကျေးကျွန် မှ မည်ကဲ့သို့ကယ်တင်ခြင်း ရရှိကြမည်နည်း၊ အဖြေမှာ မိတ်ဆွေသည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း ခံရပါမည်။ (ယောဟန် ၃း၇)။ သင့်မိဘဆီက မွေးဖွားလာခြင်းသည် အာဒံမှဆင်းသက် လာသဖြင့် အပြစ်ထဲ၌ သေရမည်သာဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေ၊ အခုပင်ထာ၀ရအသက် ရရှိဖို့ အလို့ငှါ အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းကို ခံယူပါ။
အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းကို သီဩလော်ဂျီသမ်းကာလ၌ ခရစ်တော်က “ဒုတိယမွေး ဖွားခြင်း ဟုခေါ်ခဲ့သည်။ (ယော ၃း၃ç၇) (ဒေါက်တာဂျွန်ဒေ့ဂ်ျ ၁၇၉၄-၁၈၈၄) တောင်ဘက် ခြမ်းနှစ်ခြင်း သီဩလော်ဂျီယမ်ပြောသည်မှာ အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းခောတ်တွင် အကျင့် စရိုက်ပြောင်းလဲခြင်း၊ စိတ်နှလုံးအသစ်ပြုပြင်ခြင်းစသော လူသစ်များပေါ်ပေါက်ဖွား လာကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကြီးမားသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း ပြောင်းလဲမှုပေါ်ပေါက်လာခြင်းကို သတ္တဝါအသစ်များဟု ခေါ်သည်။ (ဂျွန်-အယ်လ်ဒေ့ဂ်ျ.ဒီဒီ သီဩလော်ဂျီ လက်စွဲစာအုပ် ၊ တောင်ဘက်ခြမ်းနှစ်ခြင်းစာပုံနှိပ်တိုက် အသင်းစုç ၁၈၅၈)ဒေါက်တာဒေ့ဂ်ျက ဤကျမ်းစာအုပ်ကို ရည်ညွန်းကိုးကားသည်။
“လူမည်သည်ကား ခရစ် တော်၌ရှိလျှင် အသစ်ပြုပြင်သောသတ္တဝါဖြစ်၏။” (၂ကော ၅း၁၇)
ပထမ နိုးထသောကာလ၌၊ အောက်စဖို့တက္ကသိုလ် နာမည်ကျော်တရားဟောဆရာကြီး ဂျော့ဝှိုက်ဖီးလ် ( ၁၇၁၄-၁၇၇၀) သည် ဝဲလ်၊ အင်္ဂလန်၊ စကော့တလန်နှင့် အမေရိကနိုင်ငံ တို့၌ အတိုင်းမသိများပြားသော လူထုပရိသတ်ကြီးအား လဟာပြင်၌ တရားဟောခဲ့သည်။ (၂၂)နှစ်အရွယ် လူငယ်သာသာရှိသေးသောသူ၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် တရားဒေသနာတော် သည် ၎င်းကျမ်းချက်ကို အခြေပြုထားသည်။ (၁၈၃၇၊ ဩဂုတ်လထုတ်ဝေသည်) အခု ကျွန်တော်သည် ဝှိုက်ဖီးလ်၏ တရား ဒေသနာအသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းခေါင်းစဉ်ထဲက တိုတိုတုတ်တုတ် အကျဉ်းချုံ့ပြီး (အကျွန်ုပ် ကိုယ်ပိုင်မှတ်ချက်) မိတ်ဆွေတို့အားပေးပါမည်။ (ဂျော့ဝှိုက်ဖီးလ် ဒေသနာပီအေတန်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေး၊ ၁၉၉၄၊ အတွဲ ၃၊ ဏာ ၁၀၇-၁၁၈)သူ ကိုးကားထားသောကျမ်းမှာ-
လူမည်သည်ကား ခရစ်တော်၌ရှိလျှင် အသစ်ပြုပြင်သောသတ္တဝါဖြစ်၏ ။ (၂ကော ၅း၁၇)။
ဝှိုက်ဖေးပြောသည်မှာ အသစ်သောသတ္တဝါဖြစ်ခြင်းသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်သူတို့အဖို့ အခြေခံကျကျ လိုအပ်သောခံယူချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုသည် ထိုခံယူချက် အပေါ်၌သာ မူတည်ပါသည်။ ထိုအချက်သည် (နလနညါနူငခal ခရစ်ယာန်များ) ဂိုဏ်းဂဏအားလုံး သဘောတူညီမှု ရရှိထားသောအရာဖြစ်သည်။ ယနေ့ အသစ်မွေးဖွားခြင်းနှင့်ဆိုင်သော သတင်းကောင်း ကို နလနညါနူငခal ဆရာများ “ရှားရှားပါးပါးဟောခဲသော” တရားဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်၊ တော် တော်များ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများပင်လျှင် “အသစ်ပြုပြင်ခြင်းသတ္တဝါသစ်ဖြစ်ခြင်းကို နားလည် သဘောပေါက်သူ နည်းပါးကြသည်။ ဝှိုက်ဖီးလ်တို့ခေတ်တုန်းကကဲ့သို့ ကနေ့ခေတ် အသစ် တော်များများ၌ ထိုဝမ်းနည်းဖွယ်အခြေအနေများ ရှိနေပါသည်။
မှန်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၌ တော်တော်များများက သမ္မာကျမ်းစာကို ယုံကြည်ပါ တယ်ဟု ပြောကြသည်။ ခရစ်တော်သည် အရှင်သခင်ဖြစ်သည်ဟု ဝန်မခံခင်၊ အသွေးတော်နှင့် ဝယ်ယူ သောကယ်တင်ခြင်း၏ မျော်လင့်ခြင်းမထားခင် ထိုသူတို့၌ အသစ်ပြုပြင်ခြင်းရရှိမည်။ အသစ်မွေဖွား ရမည်။ အနက်ရှိုင်းဆုံးနှလုံးသားထဲမှာ အသစ်တဖန်မွေးဖွားရမည်ဟူသော အမှန်တရားကို ပြောရ ပါမည်။ ထိုသူတို့သည် နိကောဒင်ကဲ့သို့ငိုယိုသကဲ့သို့ အသက်ကြီးသောသူသည် မွေးဖွားခြင်းကို အဘယ်ကဲ့သို့ ခံနိုင်ပါမည်နည်း၊ ဟူ၍လည်းကောင်း အေသင်မြို့၌ရှိသူများကဲ့သို Yဤမရေရာသော လူသည် အဘယ်သို့ပြောချင်သနည်း၊ ဟုပြောခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသင်းသူ^သားများအား ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားရှေ့၌ပျောက်ဆုံးသောသူများ ဖြစ်ကြပြီး သူတို့ အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းရှိရမည်ဟု ပြောရပါမည်။ အများသောသူများတို့က ကျွန်ုပ်တို့သည် အထူးအဆန်းသက်သက်ကို ကြားရသည်ဟု ထင်ကြပါလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်ဘုရားကို ထိုသူတို့အဖို့ ဟောပြောခြင်းဖြစ်သည်။ အသစ်တစ်ဖန်မွေးဖွားပါ၊ တရားဟောဆရာများကပင် တရားပလ္လင်ကား အသစ်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော တရားကို ရှောင်ရှားကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပျောက်မှန်း မသိ ပျောက်နေသောအသင်းသူအသင်းသားများကို ကြောက်ရွံ့၍သော်၎င်း၊ အချို့သောတရားဟော ဆရာများကိုယ်တိုင် အသစ်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံမရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူတို့အဖို့ အသင်းတော်၌ အလွန်များပြားသော မယုံကြည်သူပရိသတ်များကို တမန်တော် ရှင်ပေါလုနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့ပြောရမည်မှာ
“လူမည်သည်ကား ခရစ်တော်၌ရှိလျှင် အသစ်ပြုပြင်သောသတ္တဝါဖြစ်၏” (၂ကော ၅း၁၇)။
“ကျွန်ုပ်တို့မပြောမဖြစ်ပြောရမည်မှာ အကယ်၍ခရစ်တော်၌ မရှိလျှင်၊ သူသည် အသစ်ပြုပြင် သောသတ္တဝါမဟုတ်ပါ။ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန် မဟုတ်ပါ။ အသင်းသားတစ်ယောက်သည် ထာ၀ရ ငရဲမီးအိုင်ထဲသို့ ဦးတည်သွားနေသည်ကို ပြောပြရပါမည်။”
IV. စတုတ္ထ၊ ခရစ်တော်၌အသက်ရှင်ခြင်းသည် အရေးပါသည်။
နှုတ်ကပတ်တော်မိန့်တော်မူသည်ကား လူသည်ခရစ်တော်အထဲ၌ အသက်ရှင်ရပါမည်။ ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲ၊ ခရစ်တော်ဘုရားအဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး၊ ရှေ့ဆက်ပြီး နှစ်ခြင်း မင်္ဂလာခံယူဖို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး၊ သန်းပေါင်းများစွာချီတဲ့လူအုပ်ကြီးများ နာမည်ခံ၍ နှစ်ခြင်း မင်္ဂလာခံယူနေကြတယ်။ ခရစ်တော်အဖို့ မဖြစ်ခဲ့ကြဘူး၊ ခရစ်တော်၌ အသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်ခဲ့သော နောက်ဆုံးသောတရားစီရင်တဲ့နေ့မှာ သင့်ကို ရှေ့တော်မှောက်ကဖယ်ရှားပြီး ခရစ်တော်သည် သင့်ကို ငရဲမီးအိုင်ထဲသို့ ချပစ်ပါလိမ့်မည်။မိန့်တော်မူသည်မှာ
“ထိုအခါမင်းကြီးသည် အခြံအရံတို့အား ထိုသူ၏လက်ခြေကို တုပ်နှောင် လော့။ ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာ ပြင်အရပ်မှောင်မိုက်ထဲသို့ ယူသွားပစ်လိုက်ကြဟု အမိန့် တော်ရှိ၏။ (ရှင်မသဲ ၂၂း၁၃)
ခရစ်တော်၌ရှိနေခြင်းဟူသည် ခရစ်တော်အတွက် အပြင်သဏ္ဍာန်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်မှုထက် ပို၍ လေးနက်ပါတယ်။ ခရစ်တော်၌ရှိနေခြင်းဟူသည် ခရစ်တော်ဘုရားရှင်နှင့်အတူ လက်ဝါးကပ် တိုင်၌ ခရစ်တော်နှင့်အတူ ဝေဒနာခံစားခြင်းအတူ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း၌ပါဝင်ခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ် ရှိပါတယ်။ ခရစ်တော်နှင့်ရှိနေခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အတွင်းလူခရစ်တော်နှင့် ပေါင်းစည်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သေလျက်ရှိသောငါတို့ကို ခရစ်တော်နှင့်အတူ အသက်ရှင်စေတော်မူပြီ။ ယေရှုခရစ် အားဖြင့် ငါတို့ကို ပြန်ရှင်စေ၍ ကောင်းကင်အရပ်၌ နေရာပေးတော်မူပြီ။ လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် မဟုတ်သောကြောင့် အဘယ်သူမှ ဝါကြွားစရာအကြောင်းမရှိ။ (ဧဖက် ၂း၅ç၆ç၉) ခရစ်တော်ထံ ချဉ်းကပ်ပြီး ယုံကြည်မှီခိုပါက သင်သည် အသစ်ပြုပြင်သောသတ္တဝါသစ်ဖြစ်ပြီ။ အကယ်၍ ခရစ်တော် ထံချဉ်းကပ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပါက သင်သည် ပျောက်နေသောအပြစ်သားတစ်ယောက် ဖြစ်နေဆဲပါ။ မိတ်ဆွေသည် လူသစ် သတ္တဝါသစ်ဖြစ်ခြင်းကို နားလည်နိုင်မှု မရှိသေးပါ။
V. ပဥ္စမ၊ လူတစ်ဦးသည် အသစ်သောသတ္တဝါတဦး
ဖြစ်လာခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ် နှုတ်ကပတ်တော် မိန့်တော်မူသည်ကား “လူသည် ခရစ်တော်၌ရှိလျှင် အသစ်ပြုပြင်သော သတ္တဝါဖြစ်သည်” (၂ကော၅း၁၇)။ ခန္ဓာကိုယ်အသစ်ပြောင်းလဲခြင်းကို မဆိုလိုပါ။ နိကောဒင်သည် အသိသတိမရှိနမော်နမဲ့အားဖြင့် ထိုကဲ့သို့ တွေးခေါ်ခဲ့သည်။ “အသက်ကြီး သောသူသည်မွေးခြင်းကို အဘယ်သို့ခံနိုင်ပါသနည်းဟု ယေရှု ဘုရားကို မေးခဲ့သည်။ အမိဝမ်းထဲသို့ တဖန်ဝင်၍မွေးခြင်းကို ခံနိုင်ပါမည်လော့ဟု မေးမြန်း ခဲ့သည်။ (ယော ၃း၄) အကယ်၍ထိုကဲ့သို့ မိတ်ဆွေအမိဝမ်းထဲ ပြန်ဝင်နိုင်ဆိုပါအုံး၊ လူသစ်သတ္တဝါ သစ်ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မှာ လ၊ “ဇာတိပကတိမွေးသောအရာသည် ဇာတိပကတိဖြစ်၏ (ယော ၃း၆) အခုတိုင် သင်သည် ကျဆုံးသော်လည်း ဖြစ်နေတုန်းပဲ၊ လုံး၀ဥဿုံပျက်စီးသော လူသား တစ်ယောက် ဖြစ်နေတုန်းပါ။
လူသစ်သတ္တဝါသစ်ဆိုခြင်းသည် သင့်စိတ်နှလုံးသား လုံး၀ပြောင်းလဲခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ၊ မဆိုလိုပါ။ စကောဖိ၏အလယ်ဗဟို ဒဒမဓ “ဖန်ဆင်းခြင်း” စကားလုံးကပ်ရပ် ဂရိစကား “ဖန်ဆင်း ခြင်း” နှင့်တူညီသည်။ လူသည် လူသားတဦး၏ အနှစ်သာရ၌ရှိနေဦးမည်။ လူသားကဲ့သို့ ခံစားနေဦးမှာပါ။ သို့သော် ခရစ်တော်သည် အသစ်သောစိတ်နှလုံး(အချစ်နှင့်အမုန်း)နှင့် အသစ် သောအသိစိတ်(စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု)အား ပြုပြင်ဖန်ဆင်းတော်မူလိမ့်မည်။
ဒါဝိတ်မင်းကြီးဆုတောင်းသကဲ့သို့”စင်ကြယ်သောနှလုံးသားကိုဖန်းဆင်းတော်မူပါ(ဆာ ၅၁း ၁၀)
(သို့မဟုတ်)ယေဇေကျေလ စာအုပ်၌ထာ၀ရဘုရား ကတိရှိသကဲ့သို့
“စိတ်နှလုံးသစ်ကို ငါပေး မည်။ သဘောသစ်ကို ငါသွင်းထားမည်။ သင်တို့ခန္ဓာထဲက ကျောက်နှလုံးကိုနှုတ်၍ အသားနှလုံးကို ပေးမည်။ (ယေဇကျေလ ၃၆း၂၆)။
ထိုအရာသည် အသစ်တဖန်ပြုပြင်ခြင်း၊ အသစ်မွေးဖွားခြင်း၊ သတ္တဝါအသစ်ဖြစ်ခြင်း၊ အသစ်သောဖန်ဆင်းပြုပြင်ခြင်းဖြစ်၏။
အပြစ်သားများအဖို့ အသစ်မွေး ဖွားခြင်းအကြောင်း နားလည်အောင်ရှင်းပြန်ရန် ခက်ခဲပေမည်။ ဘုရားသခင်က သင့်အား အသစ် သောမွေးဖွားခြင်းကို မဖြစ်ပွားစေပါက မိတ်ဆွေသည်သင့်အပြစ်၏ပြစ်ဒဏ်မှ ဘယ်တော့မှလွတ်နိုင် မည်မဟုတ်သလို ဘုရးသခင်၏နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဘယ်တော့မှဝင်ရလိမ့်မည် မဟုတ်ပါကြောင်း အသေအချာ ပြောနိုင်ပါသည်။ခရစ်တော်မိန့်တော်မူသည်ကား “ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံသောသူမည်သည်ကား ဘုရား သခင်၏ နိုင်ငံတော်ကို မဝင်ရဟုဆို၏ (ယော ၃း၃)။ တမန်တော်များ၏ ဩဝါဒဟူမူကား
အသစ်မွေး ဖွားခံရမည်ဟူသော သက်သေအထောက်အထားကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ မြောက်များစွာ ကိုးကား ရည်ညွန်းထားသည်ဖြစ်၍ ဆာလံဆရာကြီးက အနူးအညွတ်တောင်းလျှောက်သည်မှာ၊ “အိုဘုရား သခင်၊ အကျွန်ုပ်အထဲ၌ စင်ကြယ်သောနှလုံးကို ဖန်ဆင်းတော်မူပါ။ မြဲမြံတည်ကြည်သော သဘောသစ်(ဝိညာဉ်သစ်) ပြုပြင်တော်မူပါဟူ၏ (ဆာလံ ၅၁း၁၀) သင်၏ဘုရားသခင် ထာ၀ရဘုရားထံ အသစ်သောစိတ်နှလုံးဖြင့် ပြန်လှည့်လာဖို့ ပရောဖက်များက သတိပေးနှိုးဆော် ခဲ့သည်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ ခရစ်တော်သည် အသစ်မွေးဖွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ပြောကြားခဲ့သည်။ (ယော ၃း၃ç၈) ခရစ်တော်သည် အမှန်တကယ်အရေးကြီးသော အမိန့်တစ်ခုကို ချမှတ်သည်ကား “ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရမည်” (ယော ၃း၇) ဟုဆို၏။တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုက အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုးကြားရမည်။ (ဧ ၂း၅) ပြီးတော့ “ဘုရားသခင်နှင့်တူအောင် ဖန်ဆင်းသောလူသစ် ဖြစ်ရကြမည် (ဧ ၄း၂၃)။ တဖန်မိန့်တော်မူသည်ကား သနားခြင်းဂရုဏာတော်နှင့်အညီ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းနှင့် ဆိုင်သော ဆေးကြောခြင်းအားဖြင့်၎င်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အသစ်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း ငါတို့ကို ကယ်တင်တော်မူ၏။ (တိတု ၃း၅)။ ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ကျမ်းချက်များ ရှိတော့မည် မဟုတ်။ မိတ်ဆွေ အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းအတွက် ဤမျှလောက်သော ကျမ်းချက် အားဖြင့် လုံလောက်သည်ထင်ပါသည်။
“လူမည်သည်ကား ခရစ်တော်၌ရှိလျှင် အသစ်ပြုပြင်သောသတ္တဝါ ဖြစ်၏” (၂ကော ၅း၁၇)
စိတ်နှလုံးအသစ်ပြုပြင်ခြင်းအတွက် ဤကျမ်းချက်များသည် စေ့စပ်သေချာပြီး ပြည့်စုံပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်များ၌ရှိ လူထုပရိတ်သတ်တော်တော်များများ၊ စိတ်နှလုံးအသစ် ပြုပြင်ပြောင်း လဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နားမလည်ကြပါ။ ဤပြောင်းလဲခြင်းသည် အသစ်တဖန်ပြောင်းလဲခြင်း၊ အသစ် မွေးဖွားခြင်းနှင့်ဆိုင်သော တရားဒေသနာတော်ကို မကြာမကြာနားထောင်ခြင်း၏ အကျိုးရလဒ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား “အကြောင်းမူကား ဤလူမျိုးသည် မျက်စိ မမြင်၊ နားမကြား၊ စိတ်နှလုံးမသိ၊ အကျင့်မပြောင်းလဲ၊ သူတို့အနာရောဂါကို ငါမငြိမ်းစေရသည်တိုင် သူတို့စိတ်နှလုံးသည် မိုက်လျက်၊ နားသည်ထိုင်းလျက်၊ ကိုယ့်မျက်စိကို ပိတ်လျက်ရှိကြ၏ဟူသော စကားသည် ဤလူမျိုးတို့၌ ပြည့်စုံခြင်းရောက်သတည်း။ (မဿဲ ၁၃း၁၅)
အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခြားသောထောက်ထားစရာသည် လုံး၀ ဥဿုန် ပျက်စီးသွားသော အပြစ်သားတို့၏ အခြေအနေမှန်ဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်လာသည်ကား “ပဋိသန္ဓေယူစဉ်ပင် အပြစ်စွဲပါလျက်ရှိသည်”(ဆာ ၅၁း၅) “ငါ့ဇာတိပကတိ၌ ကောင်းသောအရာ တစ်စုံတစ်ခုမျှ မတည်သည်ကို ငါသိ၏ (ရော ၇း၁၈)။ အပြစ်တရားလက်၌ ကျေးကျွန်ဖြစ်၏။(ရော ၇း၁၄) ကတိစိတ်သဘောသည် ဘုရားသခင်နှင် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်၏။ (ရော ၈း၇) ထိုသူတို့သည် ဥာဏ်အလင်းကွယ်သည်ဖြစ်၍ စိတ်နှလုံးမိုက်မဲသောအားဖြင့် အလင်းမသိသောကြောင့် ဘုရား သခင်၏အသက်နှင့် ကွာရှင်းလျှက်ရှိကြ၏။ (ဧဖက် ၄း၁၈) အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းမရှိသော သူတို့သည် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအခြေအနေ၌ ရှိသည်။ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ် အညစ်အကြေး ရှိခြင်း၊ အကျင့်သီလပျက်ပြားခြင်း၊ ညစ်ညမ်းသောနှစ်လိုဖွယ် မကောင်းသောသူများသည် မြင့်မြတ် သန့်ရှင်းတော်မူသော ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှောက်၌ အသက်ရှင်နိုင်ကြမှာလား၊ မရှင်နိုင်ကြဘူး၊ အလင်းနှင့်အမှောင်က အတူရှိမနေနိုင်ပါ (သို့မဟုတ်) ခရစ်တော်နှင့် စာတန်မာရ်နတ်ကလည်း အတူတူ မနေနိုင်ဘူးဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းမိတ်ဆွေသိလိုက်ပါ။ မိတ်ဆွေသည် ပျောက်နေသောသူနှင့် အပြစ်သားတစ်ယောက် ဖြစ်နေခြင်း၏သံသယကို ကျော်လွန်ခြင်းမရှိပါက မိတ်ဆွေ၏အသက်တာ ကုန်ဆုံးသည့်တစ်နေ့မှာ ခရစ်တော်၌အသစ်ပြုပြင်၍ မရတော့ပါ။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဘုရားသခင်နှင့် အတူနေ၍မရတော့ပါ။ ဘုရားသခင်စီ အရောက်လှမ်းဖို့ မျှော်လင့်ချက် မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ ကောင်းကင် ဘုံဝင်စား၍လည်း မရတော့ပါ။ မိတ်ဆွေသည် အသစ်ပြုပြင်ခြင်း၊ အသစ်သောသတ္တဝါ ဖြစ်ခြင်း ရှိရပါမည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက သင့်အပြစ်၏အခ သေခြင်း၌ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မည်။
လူအများတို့သည် သေလွန်ပြီးနောက် မိမိတို့၏အပြစ်သားဘ၀ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသော ဘ၀မှ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ခံစားရမည်ဟု ထင်ကြပါသည်။ မူဆလင်ဘာသာဝင်များ ထင်ထားသကဲ့သို့ ကောင်းကင်ဘုံသည် ပရဒိသုဘုံဖြစ်ပြီး လောကစည်းစိမ်ဥစ္စာများနှင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ် ကောင်းသောနေရာဟု ထင်ကြသည်။ စစ်မှန်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသော ကောင်းကင် ဘုံသည် နာမ်ဝိညာဉ်ဘုံသာဖြစ်သည်။ မသန့်ရှင်းသောအရာ ထိုနေရာသို့ မဝင်ရကြပါ။ မိတ်ဆွေ အသစ်တဖန်ပြောင်းလဲခြင်းရှိမှသာ ဝင်ရမည်။ ကောင်းကင်ဘုံ၏ ဝမ်းမြောက်ခြင်းမတိုင်ခင် မိတ်ဆွေ ၏လုံး၀ဥဿုန်ပျက်စီးသွားသော ဘ၀အခြေအနေမှန်အတွက် အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုင်သော အထိအတွေ့ ရှိရပါမည်။ “ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း မခံသောသူ ကောင်းကင်ဘုံဝင်စားရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ခရစ်တော်မိန့်တော်မူခြင်း မရှိပါ။” ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း မခံသောသူသာလျှင် ဘုရားသခင်နှင့် နိုင်ငံတော်ကို မမြင်ရဟုသာ မိန့်တော်မူသည်။ (ယောဟန် ၃း၃ç၅)။ ယေရှုကလည်း ရေနှင့်ဝိညာဉ် မမွေးသောသူမည်သည်ကား ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ မဝင်ရဟု ငါအမှန်အကန်ဆို၏။ (ယောဟန် ၃း၅)၊ အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်မှ ဖြစ်ပွားစေခြင်းဖြစ်သည်။ ရေနှင့် ဝိညာဉ်မမွေးသောသူမည်သည်ကား ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ မဝင်ရဟု ငါအမှန်အကန်ဆို၏။ (ယော ၃း၅)၊
တချို့သောသူတို့လည်း ကျွန်ုပ်၏ဇနီးကဲ့သို့ပင် သူတို့သည် ချက်ခြင်းပြောင်းလဲကြပြီ။ ဘုရားသခင်နှင့်ဝိညာဉ်တော်က အသစ်ပြုပြင်ခြင်းဆီသို့ ပို့ဆောင်လမ်းပြပြီး သူပြစ်မှားသောအပြစ် များကို စတင်၍စဉ်းစားထုတ်ဖော်ဖို့ လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးသည်။ အပြစ်တစ်ခု ကျူးလွန်နေသဖြင့် ထိုအပြစ်ကို သူ့မိခင်အား မသိစေလို၊ ဘုရားသခင်ကို ထားဘိ၊ ကြီးလေးသောအပြစ်များကို စဉ်းစား နေသည်။ ထို့နောက် မိမိအသက်တာ၌ အခြားသောအပြစ်များကိုလည်း စဉ်းစားခွင့်ပြုလိုက်ပြီ။ ထပ်မံ၍ စဉ်းစားပြန်သည်မှာ ကျွန်တော်သည် အပြစ်သားမဟုတ်ခဲ့ရင် ဘာဖြစ်လို့ထိုအပြစ်များ ကျူးလွန်ခဲ့သလဲ၊ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် လမ်းပြပြီး သင်၏အသက်တာထဲ၌ ဗီဇအပြစ် ရှိသည်။ အပြစ်သားတစ်ဦးအနေဖြင့် မွေးဖွားခဲ့သည်။ စိတ်နှလုံးသားထဲ အပြစ်ပြည့်နှက်နေသည်စု လမ်းပြကူညီခဲ့သည်။ လှပသောအသက်တာတစ်ခုစီသို့ ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားကောင်း ကြိုးစားလာပါ လိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း သူပြောင်းလဲခြင်းအသက်တာရရှိဖို့ ရုန်းကန်ကြိုးစားခြင်းသည် အောင်မြင် ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သူသည် အပြစ်ကိုဖယ်ရှားရှင်းပစ်ဖို့ လမ်းစကိုရှာဖွေလာသည်။ အချို့သောသူတို့သည် စိတ်နှလုံးသားထဲ၌ ကြိတ်ကာငိုယိုပြီး ခံစားကြသည်။ (လုသာ.ဂျွန်ဘန်ယန်ဝှိုက်ဖီးလ်နှင့်အခြားသော နိုးထမှုလှုပ်ရှားသူများ) ထိုသူသည် ချုန်းချုန်းချငိုပါတော့၏။
ငါသည် ငြိုငြင်သောသူ ဖြစ်ပါသည် တကား၊ ဤအသေကောင်မှ ငါ့ကိုအဘယ်သူ ကယ်လွတ်မည်နည်း၊ အခုဆိုရင် ဘုရားသခင်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က လမ်းပြပေးပြီ ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားကို အမှန်တကယ် လိုအပ် သည်ကို အခု သူသိသွားပြီ။ ခရစ်တော်ဘုရားကလွဲ၍ အဘယ်သူမျှ အကျွန်ုပ်ကိုမကယ်တင်နိုင်ဘူး ပါ၊ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ကသာလျှင် ကျွန်ုပ်၏အပြစ်ကို ဆေးကြောနိုင်သည်ဟု စတင်ခံစား လာရသည်။ ခရစ်တော်ထံချဉ်းကပ်ဖို့ရန် တတ်စွမ်းနိုင်သောသူဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို သိရှိသွားပြီ။ ခရစ်တော်ဘုရားက ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ ငါထံသို့လာကြလော့၊ ငါသည်သင့်ကို ချမ်းသာပေးမည်။ (မဿဲ ၁၁း၂၈) ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့် အပြစ်များဆေးကြောနိုင် သည်ကို သူတွေ့ရှိသွား၍ အသစ်တဖန်မွေးဖွားဖို့နှင့် ခရစ်တော်ဘုရားထံ ချဉ်းကပ်ဖို့ ဘုရားသခင်နှင့် ဝိညာဉ်တော်က လမ်းပြကူညီပေးသည်။ သူ့နှလုံးသားအသစ် ပြောင်းလဲသွားပြီး ယေရှုခရစ်တော်၌ အသစ်ပြုပြင်ခြင်း ခံရသော သတ္တဝါသစ်ဖြစ်နေပြီးဖြစ်သည်။
ယခုဆိုသူသည် အိုးလ်ဂျွန်နယူတန်နှင့်တူ သီချင်းဆိုနိုင်ပြီ။
“ကျေးဇူးမေတ္တာ၊ အံ့ဖွယ်ချိုသာ ပြစ်သားငါ့ကိုကယ်ရာ
ပျောက်ဆုံးရာမှ ပြန်တွေ့ခဲ့ပြီ၊ ကန်းသောမျက်စိ မြင်ပြီ။
သက်တာခရီး ကြောက်ဖွယ်လမ်းမှာ ကျေးဇူးတော်အစဉ်ရှိပါ။
ယုံသည့်အချိန်မှာ ရဲရင့်အားရှိ ကြောက်ခြင်းအလျဉ်းမရှိပြီ။”
(အံဩဖွယ်ကျေးဇုး - ဂျွန်နယူတန် ၁၇၂၅-၁၈၀၇)
သုံးပါတစ်ဆူဖြစ်တော်မူထသော အဖခမည်းတော်ဘုရား၏ ကျေးဇူးတော်၊ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန် ထမြောက်တာ်မူသောသားတော်နှင့် အပြစ်ကိုဖော်ပြသွန်သင်တော်မူသော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်၏ တန်ခိုးတော်သည် မကြာမှီသင်တို့ အသစ်တဖန် မွေးဖွားနိုင်ပါမည်အကြောင်း ဆုတောင်း ပဌာနပြုပါ၏။(အာမင်)
ဒေသနာမတိုင်ခင်မှာ ဒေါက်တာ ခရင်တန်အဲလ်ချိုင်း မှ (ယော ၃း၁ç၇)ကို ဖတ်ကြား ပေးသည်။
ဒေသနာမတိုင်ခင် ဆိုလိုသီချင်းကို ဘင်းဂျမင်ခင်ဂိတ်ဂရက်ဖစ်(တ်)မှ သီဆို ပေးသည်။ “အသစ်မွေးဖွားရမည်” (ဝီလီယံသီစလီဘာ၊ ၁၈၁၉ မှ ၁၉၀၄)
ဒေါက်တာ အာရ်လယ်. ဟိုင်မာဂျေအာရ်
I. ပထမ လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးတို့၏ မူလအခြေအနေ။ (ကမ္ဘာဦး ၁း၂၇ç ဒေသနာကျမ်း ၇း၂၉ç ကမ္ဘာဦး ၁း၃၁၊ ဧဖက် ၄း၂၄၊ ၁ကော ၁၅း၄၅)
II. ဒုတိယ၊ ကျဆုံးလူသားများ။ (ကမ္ဘာဦး ၂း ၁၆-၁၇ç ရောမ ၅း၁၂ç၆း၂၃ç ၅း၁၉)
III. တတိယ^လက်ရှိ လူသားများ၏အခြေအနေ။ (ကမ္ဘာဦး ၅း၃ç ဧဖက် ၂း၃ç ၄း၁၈ç ၂ရာ ၆း၃၆ç ရောမ ၃း၉-၁၉ç ဧဖက် ၂း၅ç ယောဟန် ၃း၇ç ၂ကော ၅း၁၇)
IV. စတုတ္ထ၊ ခရစ်တော်၌အသက်ရှင်ခြင်းသည် အရေးပါသည်။ (မဿဲ ၂၂း၁၃ç ဧဖက် ၂း၅ç၆ç၉)
V. ပဥ္စမ၊ လူတစ်ဦးသည် အသစ်သောသတ္တဝါတဦး ဖြစ်လာခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်။ (ယောဟန် ၃း၄-၆ç ဆာလံ ၅၁း၁၀ç ယေဇကျေလ ၃၆း၂၆ç ယောဟန် ၃း၃ç ဆာလံ ၅၁း၁၀ç ယောဟန် ၃း၃ç၈ç၇၊ ဧဖက် ၂း၅ç၄း၂၃၊ တိတု ၃း၅ç မဿဲ ၁၃း၁၅ç ဆာလံ ၅၁း၅ç ရောမ ၇း၁၈ç၁၄း၈-၇ç ဧဖက် ၄း၁၈၊ ယောဟန် ၃း၃-၅၊ ရောမ ၇း၂၄၊ မဿဲ ၁၁း၂၈)